madaxweynihii hore somaaliya sheekh shariif oo BAAQ-NABADEED u direy beelaha dagaalamaya – Beegsonews-Wararka maanta
Home wararka somaaliya madaxweynihii hore somaaliya sheekh shariif oo BAAQ-NABADEED u direy beelaha dagaalamaya
madaxweynihii hore somaaliya sheekh shariif oo BAAQ-NABADEED u direy beelaha dagaalamaya
madaxweynihii hore somaaliya sheekh shariif oo BAAQ-NABADEED u direy beelaha dagaalamaya wuxuuna yidhi.
Walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamay deegaanada ka kala tirsan maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqayaa inay colaadda shuruud la’aan ku joojiyaan, wax kastana oo tabasha ahna wada hadal iyo is qancin lagu dhameeyo.
Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa madaxda, odoyaasha dhaqanka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee Jubaland iyo Koonfur Galbeed inay u istaagaan sidii dagaalladaas ahliga loo joojin lahaa, annagana waxaan diyaar ula nahay inaan ka qayb qaadanno oo aan gacan ka siinno nabadeynta dadka walaalaha ah bi’idnillaah.
Ugu dambeyntiina Dowladda Federaalka waxaan ugu baaqeynaa in ay qayb ka noqoto dadaal kasta oo looga hortagayo colaadaha soo noqnoqdey ee aafeeyey dalkeenna.
Midowga Afrika ayaa cambaareeyey muddo kordhintii ay Golaha Shacabka u sameeyeen dowladda Soomaaliya,
Xukuumada Dalka Ruushka Ayaa Ku Dhawaaqday In Ay Dalkeeda Ka Caydhisay 20 Diblomaasiyiin
Dowlada soomaaliya oo digniin culus u dirtay dowlada Kenya
Wasiirka Batroolka & Macdanta XFS oo sheegay xiligii la bilaabi lahaa...